Vahaolana indray mandeha tsy miverina… | NewsMada
Vahaolana indray mandeha tsy miverina…
Par Taratra sur 13/10/2020
Anisan’ny fanamby amin’izao ny fanovana amin’ny hoe fitondrana tsara tantana, tany sy fanjakana tan-dalàna, fangaraharana… Miara-dalana amin’izany, ohatra, ny fanovana ny fomba fiasa, ny asa atao… Anisan’ny fositra amin’ny fampandrosoana hatramin’izay ny tsy famahana izay tena fototry ny olana isan-tsehatra sy isan’ambaratonga?
Vahaolana vonjimaika no atao; eny, na mety ho fisehoana fa manao sy mahavita. Inona no eo? Miverimberina ny olana etsy sy eroa. Amin’izay, tsy mahafa-bela ny fahasahiranana lalina sy maharitra amin’izay sehatra isian’izany: olana mitambatambatra sy mitarazoka. Tsy hita na tsy atao izay tena vahaolana azo antoka, mahomby, maharitra.
Na toe-javatra miverimberina izao aza, tsy sorohina mialoha. Mitsinjo mialoha izay mety hitranga ny hoe mitondra? Miverina isaky ny roa na efa-taona, ohatra, ny kere any atsimo. Nanomboka tamin’ny taona 1980 no ho mankaty izay, raha tany amin’ny 1956, ohatra, no tena nisian’ny mosary mafy indrindra, araka ny tatitry ny mpandinika.
Nahoana no miverimberina lava ny kere? Na rehefa tena maharary ny vahoaka any ifotony vao ikoropahana hoe vonjena. Avy eo, amin’ny manaraka indray: afaka roa na efa-taona. Tsy vahaolana maharitra no imasoana? Farafaharatsiny, tsinjovina mialoha izay mety hiavian’ny kere na tsia na isan-taona. Ny enti-manana hatrany no hoe antony?
Mila fahasahiana ny fiatrehana asa lehibe amin’ny hoe fanovana: vahaolana indray mandeha tsy miverina. Loza voajanahary ka anaovana fialana? Tarazo ratsy. Ohatra ihany io fa misy toe-javatra hafa miverimberina azo sorohina mialoha fa tsy voajanahary: fizarana vatsim-pianarana eny amin’ny oniversite mampikorontana saika isan-taona, ohatra.
Ohatra ihany koa io. Eo ny karazam-pahasahiranana misy azo atao aminy mba tsy hahavoa. Tsy misy vahaolana indray mandeha tsy miverina hatramin’izay tamin’ny tompon’andraikitra na mpitondra nifandimby? Na fanatsaran-javatra ahay fa tena misy ary atao ny fiovana sy fivoarana… Soa ihany amin’izao fa miova mpitondra, miova sata?